အချစ်စစ်ကိုရှာမတွေ့နိုင်အောင် ကာဆီးထားတဲ့ ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်က ကြောက်စိတ်များ – Trend.com.mm
Posted on July 9, 2018 by Noel
အခုချိန်ထိ Single ဖြစ်နေဆဲမိန်းကလေးတွေကိုမေးကြည့်ပါ။ဘာလို့ ချစ်သူမထားသေးလဲဆိုတာပေါ့။သူတို့ဆီက အဖြေက သူတုိ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူ၊အချစ်စစ်ကိုစောင့်နေတာ၊တစ်သက်လုံးလက်တွဲသွားရမယ့်ချစ်သူကိုရှာနေတာလို့အများစုကဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုသိထားရမှာက
ဘယ်လောက်ပဲ Relationship နဲ့ပတ်သက်လို့ သိသိ၊အချစ်စစ်ကိုဘယ်လောက်ပဲရှာနေရှာနေ သင့်မှာဒီလိုကြောက်စိတ်တွေရှိနေရင် အချစ်စစ်ကိုရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။
တစ်ခုခုမဖြစ်ခင်တည်းက ကြိုတင်ပြီးကြောက်ရွံ့နေတာက တစ်ဝက်ရှုံးနိမ့်နေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုသလို အချစ်စစ်ကိုရှာနေပေမဲ့ နှလုံးသားနဲ့မခံစားမိရင် ဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြောက်စိတ်တွေက အချစ်စစ်ကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာပိတ်ပင်နေလို့ပါ။သင့်မှာရော ဒီလိုကြောက်စိတ်တွေရှိနေလား?
၁)Relationship ထဲမှာ သင့်ကိုယ်သင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်
ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ချစ်ခင်တဲ့သူကိုလိုအပ်သလောက် အဲ့ဒီဆန္ဒထက် သင့်ကိုယ်သင့် ဒီ Relationship ထဲမှာ ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာ၊သင့်ဘ၀ကိုတစ်ခြားသူတစ်ယောက်အတွက်ပေးဆပ်လိုက်ရသလိုဖြစ်သွားမှာ၊သင့်ဘ၀က တစ်ခြားသူအတွက်အသက်ရှင်နေရသလိုဖြစ်သွားမှာ၊
Trust me! အချစ်စစ်ဆိုတာကို တွေ့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
တစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ခုခုဆိုဝမ်းနည်းရတာနဲ့။နာကျင်ရတာနဲ့၊ပျော်ရွှင်ရတာနဲ့။မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေရလာပါတော့တယ်။သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။တော်တော်များများပါပဲ။တကယ်လို့များ Relationship တစ်ခုရှိလာလို့ နာကျင်ရမယ့်ခံစားချက်ကို ကြောက်ရွံ့နေမယ်၊အချစ်မှာပျော်ဝင်တာထက် နာကျင်ရတဲ့ခံစားချက်၊လျစ်လျူရှုခံရတဲ့ခံစားချက်မျိုးရမှာကို ကြောက်လန့်စိတ်ကပိုများနေမယ်ဆိုရင် အချစ်စစ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုတွေ့နိုင်မှာလဲ။အသည်းကွဲတဲ့ဒဏ်ရာကို သေချာမစီမံမခန့်ခွဲတတ်သရွေ့ကတော့ နာကျင်နေရဦးမှာပါပဲ။ဒါကိုတွန်းထုတ်နေရုံနဲ့ မနာကျင်တော့ဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
ချစ်သူထားတော့မယ်လို့စဉ်းစားပြီးရင်တောင် သူနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါ ငါအမှားတစ်ခုခုလုပ်မိသွားမလား၊င့ါအမှားကြောင့် ချစ်သူတွေအဖြစ်ကပြတ်စဲသွားမလားစသဖြင့် ရှေ့တောင်ဆက်မတိုးရသေးဘူး။ဒီလိုတွေကြိုတွေးပြီးကြောက်နေမယ်ဆိုရင် အချစ်စစ်ဆိုတာနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုအမှားတွေသင်ခန်းစာတွေသင်ယူရင်းကပဲ သင့်အတွက်မှန်ကန်တဲ့လက်တွဲဖော်ကိုတွေ့လာမှာပါ။
သင့်မှာဘယ်လိုခံစားချက်တွေပဲရှိရှိ အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုလိုက်ဖို့ သင့်ကိုယ်သင်မချစ်ဘူး၊သင်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနောက်ကိုမလိုက်ခိုင်းဘူး။သင့်ကိုယ့်သင်ချစ်တာထက် သင့်ခံစားချက်တွေကိုအလိုလိုက်တာထက် သင့်ကိုယ်သင်ထိန်းချုပ်ပစ်လိုက်ဖို့၊သင့်ခံစားချက်တွေကိုမသိကျိုးကျွန်လုပ်လိုက်ဖို့
စဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒါက စွဲလန်းမှုတစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တစ်ယောက်ယောက်က “မင်းဝမ်းနည်းနေလား”မေးတာကို ၀မ်းနည်းနေရဲ့သားနဲ့ “ငါ့ခံစားချက်ကဘာလဲဆိုတာတောင်သေချာမသိဘူး”လို့ညာပြောလိုက်ပြီဆိုပါတော့။နောက်ဆိုရင် ဒီလိုမသိဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြေရတာကိုပဲ
အကြိုက်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ဒါက သင်တစ်ယောက်တည်းသက်ရောက်မှုရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခြားသူတွေကပါ သင့်ကိုမေးရင်ဘာခံစားချက်မှမရှိသလိုဖြေတဲ့အတွက် နောက်ထပ်လည်းမေးမှာ မဟုတ်တော့သလို သင့်ခံစားချက်အမှန်ဆိုတာကိုလည်းသိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါက သင့်ကို တစ်ခြားသူတွေက မမြင်ရသလို၊သင်ရှိတယ်လို့မထင်ရလောက်အောင်လုပ်လိုက်တာပါပဲ။
ဒီကြောက်လန့်စိတ်တွေကို ဘေးဖယ်ထုတ်ပြီး အချစ်စစ်ကိုရှာဖွေတွေ့နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ❤
အခုခြိနျထိ Single ဖွဈနဆေဲမိနျးကလေးတှကေိုမေးကွညျ့ပါ။ဘာလို့ ခဈြသူမထားသေးလဲဆိုတာပေါ့။သူတို့ဆီက အဖွကေ သူတို့ကိုတကယျခဈြတဲ့သူ၊အခဈြစဈကိုစောငျ့နတော၊တဈသကျလုံးလကျတှဲသှားရမယျ့ခဈြသူကိုရှာနတောလို့အမြားစုကဖွကွေပါလိမျ့မယျ။ဒါပမေဲ့တဈခုသိထားရမှာက
ဘယျလောကျပဲ Relationship နဲ့ပတျသကျလို့ သိသိ၊အခဈြစဈကိုဘယျလောကျပဲရှာနရှောနေ သငျ့မှာဒီလိုကွောကျစိတျတှရှေိနရေငျ အခဈြစဈကိုရှာတှနေို့ငျမှာမဟုတျပါဘူးတဲ့။
တဈခုခုမဖွဈခငျတညျးက ကွိုတငျပွီးကွောကျရှံ့နတောက တဈဝကျရှုံးနိမျ့နပွေီးသားဖွဈတယျဆိုသလို အခဈြစဈကိုရှာနပေမေဲ့ နှလုံးသားနဲ့မခံစားမိရငျ ဘယျတော့မှတှမှေ့ာမဟုတျပါဘူး။ဒီကွောကျစိတျတှကေ အခဈြစဈကိုရှာဖှတေဲ့နရောမှာပိတျပငျနလေို့ပါ။သငျ့မှာရော ဒီလိုကွောကျစိတျတှရှေိနလေား?
၁)Relationship ထဲမှာ သငျ့ကိုယျသငျဆုံးရှုံးလိုကျရမှာကိုကွောကျတဲ့စိတျ
ကိုယျ့အပျေါတကယျခဈြခငျတဲ့သူကိုလိုအပျသလောကျ အဲ့ဒီဆန်ဒထကျ သငျ့ကိုယျသငျ့ ဒီ Relationship ထဲမှာ ဆုံးရှုံးလိုကျရမှာ၊သငျ့ဘဝကိုတဈခွားသူတဈယောကျအတှကျပေးဆပျလိုကျရသလိုဖွဈသှားမှာ၊သငျ့ဘဝက တဈခွားသူအတှကျအသကျရှငျနရေသလိုဖွဈသှားမှာ၊
Trust me! အခဈြစဈျဆိုတာကို တှမှေ့ာမဟုတျတော့ပါဘူး။
တဈယောကျယောကျကိုခဈြမိပွီဆိုတာနဲ့ တဈခုခုဆိုဝမျးနညျးရတာနဲ့။နာကငျြရတာနဲ့၊ပြျောရှငျရတာနဲ့။မပွီးဆုံးနိုငျတဲ့ခံစားခကျြတှရေလာပါတော့တယျ။သငျတဈယောကျတညျးမဟုတျပါဘူး။တျောတျောမြားမြားပါပဲ။တကယျလို့မြား Relationship တဈခုရှိလာလို့ နာကငျြရမယျ့ခံစားခကျြကို ကွောကျရှံ့နမေယျ၊အခဈြမှာပြျောဝငျတာထကျ နာကငျြရတဲ့ခံစားခကျြ၊လဈြလြူရှုခံရတဲ့ခံစားခကျြမြိုးရမှာကို ကွောကျလနျ့စိတျကပိုမြားနမေယျဆိုရငျ အခဈြစဈဆိုတာကိုဘယျလိုတှနေို့ငျမှာလဲ။အသညျးကှဲတဲ့ဒဏျရာကို သခြောမစီမံမခနျ့ခှဲတတျသရှကေ့တော့ နာကငျြနရေဦးမှာပါပဲ။ဒါကိုတှနျးထုတျနရေုံနဲ့ မနာကငျြတော့ဘူးဆိုတာ ဖွဈနိုငျပါ့မလား။
ခဈြသူထားတော့မယျလို့စဉျးစားပွီးရငျတောငျ သူနဲ့ခဈြသူတှဖွေဈသှားတဲ့အခါ ငါအမှားတဈခုခုလုပျမိသှားမလား၊င့ါအမှားကွောငျ့ ခဈြသူတှအေဖွဈကပွတျစဲသှားမလားစသဖွငျ့ ရှတေ့ောငျဆကျမတိုးရသေးဘူး။ဒီလိုတှကွေိုတှေးပွီးကွောကျနမေယျဆိုရငျ အခဈြစဈဆိုတာနဲ့တှမှေ့ာမဟုတျပါဘူး။ဒီလိုအမှားတှသေငျခနျးစာတှသေငျယူရငျးကပဲ သငျ့အတှကျမှနျကနျတဲ့လကျတှဲဖျောကိုတှလေ့ာမှာပါ။
သငျ့မှာဘယျလိုခံစားခကျြတှပေဲရှိရှိ အဲ့ဒီခံစားခကျြတှကေိုလိုကျဖို့ သငျ့ကိုယျသငျမခဈြဘူး၊သငျလုပျခငျြတဲ့ဆန်ဒနောကျကိုမလိုကျခိုငျးဘူး။သငျ့ကိုယျ့သငျခဈြတာထကျ သငျ့ခံစားခကျြတှကေိုအလိုလိုကျတာထကျ သငျ့ကိုယျသငျထိနျးခြုပျပဈလိုကျဖို့၊သငျ့ခံစားခကျြတှကေိုမသိကြိုးကြှနျလုပျလိုကျဖို့
စဉျးစားလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ ဒါက စှဲလနျးမှုတဈခုလိုဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။တဈယောကျယောကျက “မငျးဝမျးနညျးနလေား”မေးတာကို ဝမျးနညျးနရေဲ့သားနဲ့ “ငါ့ခံစားခကျြကဘာလဲဆိုတာတောငျသခြောမသိဘူး”လို့ညာပွောလိုကျပွီဆိုပါတော့။နောကျဆိုရငျ ဒီလိုမသိဘူး။ဘာမှမဖွဈဘူးဖွရေတာကိုပဲ
အကွိုကျတှလေ့ာပါလိမျ့မယျ။ဒါက သငျတဈယောကျတညျးသကျရောကျမှုရှိတာမဟုတျပါဘူး။တဈခွားသူတှကေပါ သငျ့ကိုမေးရငျဘာခံစားခကျြမှမရှိသလိုဖွတေဲ့အတှကျ နောကျထပျလညျးမေးမှာ မဟုတျတော့သလို သငျ့ခံစားခကျြအမှနျဆိုတာကိုလညျးသိတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ဒါက သငျ့ကို တဈခွားသူတှကေ မမွငျရသလို၊သငျရှိတယျလို့မထငျရလောကျအောငျလုပျလိုကျတာပါပဲ။
ဒီကွောကျလနျ့စိတျတှကေို ဘေးဖယျထုတျပွီး အခဈြစဈကိုရှာဖှတှေနေို့ငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော